नेपालसहित विश्वभर खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइँदै
संयुक्त राष्ट्र संघकाे निर्णय अनुसार २०१९ देखि जून ७ का दिन विश्वभर खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउन थालिएकाे हाे । नेपालमा भने १२ वर्षदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतकाे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकाे नेतृत्वमा हरेक वर्ष खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउदै आइएकाे छ । प्रधानमन्त्रीकाे शुभकामना सन्देशकाे पूर्णपाठः आज जून ७ का दिन हामी विश्वव्यापी रुपमा दोस्रो विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउँदै छौँ । यस अवसरमा म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सन् २०१८ डिसेम्बर २० का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले हरेक वर्ष जून...
काेराेना संक्रमण ७१ जिल्ला पुग्याे, ३४४८ संक्रमित
नेपालमा ७१ जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ भने कोरोना संक्रमितको संख्या ३४ सय नाघेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्ममा संक्रमितको संख्या ३४४८ पुगेको हो । कुल संक्रमित मध्ये ३ हजार २ सय १२ जना पुरुष र २ सय ३६ जना महिला रहेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म १३ जनाको कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै कुल निको हुनेको संख्या ४ सय ६७ पुगेको छ। जसमध्ये ३ सय ९९ जना पुरुष र ६८ जना महिला रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको आशंकामा कुल ९६ हजार २ सय ५ जनाको आरटी-पीसीआर परीक्षण भएको छ। त्यस्तै १ लाख ४५ हजार ४९ आरडिटी परीक्षण भएको छ। मुलुकभर १ लाख ७० हजार ७ सय ३२...
विश्वमा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या चार लाख नाघेको छ। वल्र्डओमिटरका अनुसार आइतबार बिहान ६ बजेसम्म विश्वभर गरेर संक्रमणबाट चार लाख एक हजार ६ सय सात जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमितको संख्या ६९ लाख ६६ हजार चार सय ९० पुगेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी अमेरिकामा एक लाख १२ हजार भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। गएको २४ घण्टामा ब्राजिलमा सबैभन्दा धेरै नौ सय १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अमेरिकामा सात सय ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी गएको २४ घण्टामा विश्वभर गरेर एक लाख २६ हजार भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसबीचमा सबैभन्दा धेरै ब्राजिलमा साढे २७ हजारभन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएक...
सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्यामा भारतले इटलीलाई उछिन्यो
भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेर अहिले दुई लाख ३६ हजार नाघेको छ। त्यहाँ कोभिड-१९ ले साढे ६ हजारभन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। अहिले संसारभरिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या ६७ लाखभन्दा धेरै पुगेको छ। साथै झन्डै चार लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ। छैटौँ स्थानमा भारत र त्यसपछि इटली (दुई लाख ३४ हजार) छन्। अमेरिकामा मात्रै एक लाख नौ हजार जनाको ज्यान गइसकेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको आँकडाले देखाउँछ। भारतमा कहाँ धेरै सङ्क्रमित छन्? भारतमा सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा छन्। त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ८० हजार नाघेको छ भने २,८०० जनाको ज्य...
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मास्क लगाउने विषयमा उसको पुरानो सुझाव परिवर्तन गर्दै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्न आम मानिसलाई सार्वजनिक स्थानमा मास्क लगाउन सल्लाह दिएको छ। डब्ल्यूएचओका अनुसार मास्क लगाउँदा 'सम्भावित सङ्क्रामक छिटालाई एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्नमा अवरोध' हुन्छ। विगतमा उक्त संस्थाले मास्कले सङ्क्रमण रोक्छ भन्नेबारे पर्याप्त प्रमाण नभएको जनाएको थियो। अहिले नै कैयौँ देशमा मास्क लगाउन सुझाव दिइएका वा अनिवार्य गराइएका छन्। कस्तो मास्क? डब्ल्यूएचओकी प्राविधिक विज्ञ डा. मारिया भान कर्खोभले समाचारसंस्था रोएटर्स सँग कुरा गर्दै आफूहरूले सर्वसाधारणलाई 'मेडिकल मास्क नभई कपडाको न मास्क' लगाउ...
नेपालमा काेराेना संक्रमित ३२३५ र १३ काे मृत्यु
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट नेपालमा थप दुई जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्। योसँगै मृत्यु स‌ंख्या १३ पुगेको हो । कुल संक्रमितको संख्या ३ हजार २ सय ३५ पुगेको छ। जसमध्ये ३ हजार ३ जना पुरुष र २ सय ३२ जना महिला रहेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार निको हुनेको संख्या ३ सय ६५ पुगेको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको आशंकामा कुल ९२ हजार ४ सय ७७ पीसीआर परीक्षण भएको छ। त्यस्तै १ लाख ३७ हजार ४ सय ३५ आरडिटी परीक्षण भएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार १ सय ११ पीसीआर परीक्षण भएको छ भने ५ हजार ५ स...